အခကျအခဲအမြိုးမြိုးကွားမှာ ရုပျရှငျဆကျမရိုကျရလို့ စိတျညဈနကွေတဲ့ တိုငျရှနျနဲ့ ဆောငျးဝတျရညျမေ - Cele Gabar
စာရေးဆရာမကွီးမစန်ဒာရဲ့နာမညျကွီးဝတ်ထုကို ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲအဖွဈမွငျတှရေ့မယျ့ “ဂြီဟောသူ”
လကျရှိမှာတော့ တိုငျရှနျ၊ အေးခမျြးမောငျနဲ့ ဆောငျးဝတျရညျမတေို့သုံးယောကျသားက ” Player ” ဆိုတဲ့ရုပျရှငျဇာတျကားကို ရိုကျကူးနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုရိုကျကူးနစေဉျမှာပဲ ရာသီဥတုရဲ့ ရိုကျခတျမှုတှကေို အလူးအလဲခံစားပွီး မရမကရိုကျကူးခဲ့ ပမေယျ့ ဒီနမေ့နကျပိုငျးမှာတော့ ပွငျးလှနျးတဲ့ နပေူရှိနျကွောငျ့ ရုပျရှငျမရိုကျပဲခဏနားထားရာကနေ ညဖကျ Night Scene မှာလညျး မီးထိုးထားတဲ့ အပျေါမှာ ပိုးဖလံတှေ အုံနဲ့ကငျြးနဲ့ရောကျလာတာမို့ ရိုကျကူးဖို့အခကျအခဲဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
ရှုတငျအဖှဲ့သားတှအေားလုံးကလညျး စိတျညဈနပွေီး တုတုကတော့ ” မမေေ ရေ မနကျကတြော့ နပေူလှနျးလို့. ညကတြော့လဲ ပိုးကောငျတှေ နှိပျဆကျလို့ ငိုခငျြနပေါပွီ ” ဆိုပွီး စိတျညဈညဈနဲ့ ငွီးငွူနတေဲ့စာသားလေးကို သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျကနေ တငျထား တာပဲဖွဈပါတယျ။ ရိုကျကှငျးမှာ ပိုးဖလံတှအေမြားကွီးရောကျနတေဲ့ပုံရိပျတှကေိုလညျး တိုငျရှနျက ” မနကျထဲကခုထိဘဲ မနကျက နအေရမျးပူတယျ အခု ကြ ပိုးကောငျတှနေဲ့ ဆကျရိုကျမရဖွဈနတေယျ ” ဆိုပွီး ဝမြှေခဲ့ပါသေးတယျ။
အနုပညာရှငျတှရေဲ့ဘဝကတော့ နပေူမရှောငျမိုးရှာမရှောငျ ပရိသတျတှကေိုဖြျောဖွဖေို့ တငျဆကျနရေပွီး အခုလိုအခကျအခဲတှေ ကွုံတဲ့အခါကတြော့လညျး စိတျရောလူပါ ပငျပနျးရပါတယျ။ အားလုံးကွိုးစားပွီး ရိုကျကူးထားတဲ့ဒီဇာတျကားလေးထှကျလာရငျတော့ ပရိသတျတှကေ အပွညျ့အဝအားပေးဖို့ လိုမယျနျော။
” အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားမှာ ရုပ်ရှင်ဆက်မရိုက်ရလို့ စိတ်ညစ်နေကြတဲ့ တိုင်ရွန်နဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေ ”
လက်ရှိမှာတော့ တိုင်ရွန်၊ အေးချမ်းမောင်နဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေတို့သုံးယောက်သားက ” Player ” ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူး နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရိုက်ကူးနေစဉ်မှာပဲ ရာသီဥတုရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေကို အလူးအလဲခံစားပြီး မရမကရိုက်ကူးခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းမှာတော့ ပြင်းလွန်းတဲ့ နေပူရှိန်ကြောင့် ရုပ်ရှင်မရိုက်ပဲခဏနားထားရာကနေ ညဖက် Night Scene မှာလည်း မီးထိုးထားတဲ့ အပေါ်မှာ ပိုးဖလံတွေ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရောက်လာတာမို့ ရိုက်ကူးဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ရှုတင်အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကလည်း စိတ်ညစ်နေပြီး တုတုကတော့ ” မေမေ ရေ မနက်ကျတော့ နေပူလွန်းလို့. ညကျတော့လဲ ပိုးကောင်တွေ နှိပ်ဆက်လို့ ငိုချင်နေပါပြီ ” ဆိုပြီး စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ငြီးငြူနေတဲ့စာသားလေးကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ကနေ တင်ထား တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ကွင်းမှာ ပိုးဖလံတွေအများကြီးရောက်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်း တိုင်ရွန်က ” မနက်ထဲကခုထိဘဲ မနက်က နေအရမ်းပူတယ် အခု ကျ ပိုးကောင်တွေနဲ့ ဆက်ရိုက်မရဖြစ်နေတယ် ” ဆိုပြီး ဝေမျှခဲ့ပါသေးတယ်။
အနုပညာရှင်တွေရဲ့ဘဝကတော့ နေပူမရှောင်မိုးရွာမရှောင် ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေဖို့ တင်ဆက်နေရပြီး အခုလိုအခက်အခဲတွေကြုံတဲ့ အခါကျတော့လည်း စိတ်ရောလူပါ ပင်ပန်းရပါတယ်။ အားလုံးကြိုးစားပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဇာတ်ကားလေးထွက်လာရင်တော့ ပရိသတ်တွေက အပြည့်အဝအားပေးဖို့ လိုမယ်နော်။